Space Jam: A New Legacy (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဘတျစကကျဘောအားကစားပရိတျသကျမြားအကွိုကျတှစေ့မေယျ့ဇာတျကားလေးကိုဒီတဈခါမှာမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဘတျစကကျဘောလောကရဲ့ဘုရငျ LeBron James ကိုယျတိုငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈတဲ့ Space Jam A New Legacy ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးပါပဲ။ ဒီ American Live action & Animated Sport Comedy ဇာတျကားလေးကို ၂၀၂၁ ဇူလိုငျလ ၁၄ရကျနကေ့မှထှကျထားတာကွောငျ့ ပူပူနှေးနှေးအသဈစကျစကျလေးပါနျော။
ငယျစဥ◌ျကခြို့တဲ့ပွီးမိခငျဖွဈသူနဲ့သာနထေိုငျခဲ့ရတဲ့ LeBron James ဟာလူငယျဘ၀ရဲ့အပြျောအပါးအားလုံးကိုစှနျ့လှတျပွီး နညျးပွရဲ့လမျးညှနျမှုအောကျမှာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံတဈယောကျဖွဈလာတဲ့အထိတဈစိုကျမတျမတျကွိုးစားလာခဲ့ပါတယျ။ ကွိုးစားခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲထိုကျတနျတဲ့ မရတှေကျနိုငျတဲ့အောငျမွငျမှုတှရေခဲ့ပွီးအမရေိကနျနိုငျငံရဲ့စူပါစတားတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ထို့အတူ ဇနီးဖွဈသူကာမီယာနဲ့သားလေးနှဈယောကျ၊ သမီးလေးတဈယောကျကိုပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
သားကွီးဖွဈသူဒယျရီးယကျဈကဖခငျလိုခငျြတဲ့ပုံစံအတိုငျးဘတျစကကျအားကစားသမားတဈယောကျဖွဈလာပမေယျ့ သားငယျဒှနျမျမဈနဈကတော့ဂိမျးဖနျတီးခွငျးကိုသာပိုပွီး စိတျဝ◌ငျစားခဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဖခငျလဈဘရှနျနဲ့ သားငယျဒှနျမျမဈနဈတို့ကွားထဲမှာသဘောထားကှဲလှဲမှုတှနေဲ့အခွအေတငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုသားအဖဆကျဆံရေးအဆငျမပွတေဲ့အခြိနျ ထူးဆနျးတဲ့အယျလျဂိုရဈသမျနဲ့တှဆေုံ့ပွီး ကှနျပြူတာဆာဗာထဲကိုသားအဖနှဈယောကျရောကျသှားတဲ့အခါမှာ…ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈကွမလဲ??
ဖခငျဖွဈသူရဲ့သားငယျအပျေါတဈလှဲစတေနာတှနေဲ့ သားငယျရဲ့ခေါငျးမာမှုတှကေို ဘယျလိုအဖွဈအပကျြတှကေအမွငျမှနျတှရေစမေလဲ…?
ဒါ့အပွငျကြှနျမတို့ငယျစဥ◌ျကအိပျယာဝ◌ငျ Comic တှရေဲ့ဇာတျကောငျလေးတှဖွေဈတဲ့ Bugs Bunny ဦးဆောငျတဲ့ Looney Tunes လေးတို့ပါပါလာမယျဆိုတော့…လုံးဝကိုလကျမလှတျသငျ့တဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈနပေါပွီနျော။
ဒီဇာတျကားကိုအညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Erica Sean ဖွဈပါတယျ။
ဘတ်စကက်ဘောအားကစားပရိတ်သက်များအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားလေးကိုဒီတစ်ခါမှာမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘတ်စကက်ဘောလောကရဲ့ဘုရင် LeBron James ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Space Jam A New Legacy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ ဒီ American Live action & Animated Sport Comedy ဇာတ်ကားလေးကို ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၁၄ရက်နေ့ကမှထွက်ထားတာကြောင့် ပူပူနွေးနွေးအသစ်စက်စက်လေးပါနော်။
ငယ်စဥ◌်ကချို့တဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ LeBron James ဟာလူငယ်ဘ၀ရဲ့အပျော်အပါးအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီး နည်းပြရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိတစ်စိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲထိုက်တန်တဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စူပါစတားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ဇနီးဖြစ်သူကာမီယာနဲ့သားလေးနှစ်ယောက်၊ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သားကြီးဖြစ်သူဒယ်ရီးယက်စ်ကဖခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဘတ်စကက်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပေမယ့် သားငယ်ဒွန်မ်မစ်နစ်ကတော့ဂိမ်းဖန်တီးခြင်းကိုသာပိုပြီး စိတ်ဝ◌င်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖခင်လစ်ဘရွန်နဲ့ သားငယ်ဒွန်မ်မစ်နစ်တို့ကြားထဲမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသားအဖဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန် ထူးဆန်းတဲ့အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကွန်ပျူတာဆာဗာထဲကိုသားအဖနှစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ…ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ??
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သားငယ်အပေါ်တစ်လွဲစေတနာတွေနဲ့ သားငယ်ရဲ့ခေါင်းမာမှုတွေကို ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေကအမြင်မှန်တွေရစေမလဲ…?
ဒါ့အပြင်ကျွန်မတို့ငယ်စဥ◌်ကအိပ်ယာဝ◌င် Comic တွေရဲ့ဇာတ်ကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Bugs Bunny ဦးဆောင်တဲ့ Looney Tunes လေးတို့ပါပါလာမယ်ဆိုတော့…လုံးဝကိုလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်နေပါပြီနော်။
ဒီဇာတ်ကားကိုအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Erica Sean ဖြစ်ပါတယ်။
Option 1 teracloud.jp 548 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 548 MB SD (480p)
Option4teracloud.jp 1.3 GB HD (1080p)